Uninzi lweenkampani zemveliso ziya kuhlaziya umxholo wazo kwi4k ye-Apple TV entsha, ngaphandle kweDisney | Ndisuka mac
Uninzi lweenkampani zemveliso ziya kuhlaziya umxholo wazo kwi4k ye-Apple TV entsha, ngaphandle kweDisney
Olunye lwamathandabuzo oluvele kwiintsuku zamva nje ngokunxulumene nomxholo esiza kuwubona kwiApple TV 4k ziinguqulelo ezikhoyo zezihloko esele zithengiwe. Kulungile ngale ndlela sikwithamsanqa, kulungile uninzi lwabasasazi luya kubonelela ngeenguqulelo ze-4k zeemovie zabo, Ngaphandle kokuba umsebenzisi enze nantoni na malunga nayo. Ewe kunjalo, ngaphandle kokuchaphazela ipokotho yakho. Kwelinye icala, elona xabiso liphezulu lifumanekayo ligcinwaKe ngoko, akuyi kufuneka sihlawule ngaphezulu ukuba izixhobo zethu zilungiselelwe ukuvelisa kwakhona i-4k. Siza kuba neemovie kwi-UHD ngexabiso le-HD.
Kodwa ayinguye wonke umntu osebenzisana ngendlela efanayo neApple. Kuyabonakala ukuba, I-Disney iya kuba kuphela kwenkampani yokuvelisa eya kuvavanya utshintsho. Iindaba zaziwa ukusukela izolo, xa embindini wentetho ephambili iilogo zazo zonke iinkampani zemveliso ezibandakanyekayo kutshintsho zibonisiwe:
IiLogo zezona studio zinkulu ziboniswe ngokufutshane kwiscreen esingemva kukaMnu Cue, kubandakanya iWarner Bros yeTime Warner Inc kunye neMifanekiso yeComcast yeLizwe jikelele ...
Kungabonakala ngathi iDisney ayikubeki phambili ngokonyuka komgangatho kwaye ke ayizivelisi kuloo fomathi. Kodwa esi ayisosizathu, kuba iDisney ithengisa iimovie kwi-UHD kwiVUDU, umzekelo.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukusebenzisana kuka-Apple neDisney kusondele. Ngaphandle kokuya phambili, kwigama eliphambili leWWDC 2017 yokugqibela, sabona ukudayala okutsha kweApple Watch. Kodwa kuyinyani ukuba iDisney ithathela ingqalelo ukuba nesitishi sayo, kwisitayile seNetflix, HBO okanye iApple uqobo.
Ukungabikho kweDisney kubaluleke kakhulu kunikwa ubudlelwane obusondeleyo, obude obude phakathi kweenkampani ezimbini. Umphathi weDisney uRobert Iger ukwibhodi yabalawuli yeApple, kwaye iDisney yayiyeyona studio yokuqala yokuthengisa iinkqubo zeTV kunye neemovie kwiTunes.
Xa bekudityanwa namaqela, okwangoku akukho mntu uthethileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Uninzi lweenkampani zemveliso ziya kuhlaziya umxholo wazo kwi4k ye-Apple TV entsha, ngaphandle kweDisney
IFransi ne-UK baya kuba neApple Watch Series 3 LTE kwintengiso nge-22/9